The MYAWADY Daily: August 2017
31-8-2017 Sports View Journal by TheMyawadyDaily on Scribd
31-8-2017 mtp by TheMyawadyDaily on Scribd
မြန်မာ-ထိုင်းနှစ်နိုင်ငံအကြား စဉ်ဆက်မပြတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဒေသတွင်း တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးများကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Gen. Prayut Chan-o-Cha တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဖြစ်သူ Gen. Prawit Wongsuwon တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် Gen. Prayut Chan-o-Cha တို့ တွေ့ဆုံပွဲသို့တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်စဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် ထိုင်းဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ဝါရင့်နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ် Gen. Prem Tinsulanonda (Rtd) တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်။
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ထိုင်း-မြန်မာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး 5th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting သို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် Khon Khan လေဆိပ်မှ ဗန်ကောက်မြို့သို့ထွက်ခွာကြရာ လေဆိပ်တွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ဂုဏ်ပြုတပ်ဖွဲ့၏ အလေးပြုခြင်းကိုခံယူသည်။ လေဆိပ်၌တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား အမှတ်(၃)စစ်တိုင်းမှူး Lt. Gen. Vijak Siribunsop နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် အရာရှိကြီးများက ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ယင်းနောက် ဗန်ကောက်မြို့၊ ဒွန်မောင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ် Wing6သို့ရောက်ရှိကြရာ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်းနှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် အရာရှိကြီးများက ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက်မွန်းလွဲပိုင်းတွင် အစိုးရအိမ်တော်ခန်းမ၌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် Gen. Prayut Chan-o-Cha နှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ မြန်မာသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများနှင့် မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်တို့တက်ရောက်ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်နှင့်အတူ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Surapong Suwana-adth နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံအစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ထိုင်း-မြန်မာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အစည်းအဝေး 5th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting ကို အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ၀မ်းသာဂုဏ်ယူ ပါကြောင်း၊ မိမိတို့နိုင်ငံ၌ ရေကြီးမှုများဖြစ်ပေါ်စဉ် ကူညီပေးခဲ့သည့်အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ယခုထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍများတွင်လည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်တွင် ကောင်းမွန်သည့် အခြေအနေဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူကုန်ကူးမှု၊ တရားမ၀င်လက်နက်ရောင်းဝယ်မှုနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်း ၀ယ်မှုများကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ဒေသတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် များစွာဝမ်းနည်းပါကြောင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ယခုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အစည်းအဝေးမှတစ်ဆင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရရှိစေရေးအတွက် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် နယ်စပ်ဒေသ လုံခြုံရေးများကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလည်းကြိုဆိုပါကြောင်း၊ ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လက်နက်ကိုင်အကြမ်းဖက်သမား များက အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များနှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများကို အကြောင်းမဲ့ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခဲ့မှုကြောင့် ယနေ့အထိ အဆိုပါဒေသတွင် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ် ၈၁ ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တပ်မတော်၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း ၁၅ ဦး နှင့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ သေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းဖြစ်စဉ်များသည် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ထိခိုက်လာသဖြင့် ထိရောက်စွာ ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်နေသော မိမိတို့နိုင်ငံသားများကို တရားဥပဒေနှင့်အညီ ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးစေလိုကြောင်းနှင့် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် တို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ပြီး တက်ရောက်လာကြသူများနှင့်အတူ စုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ထို့အတူ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်နှင့် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဖြစ်သူ Gen. Prawit Wongsuwon အားနံနက်ပိုင်း၌ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမတွင်တွေ့ဆုံပြီး နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား HLC ၊ RBC နှင့် TBC အစည်းအဝေးများ စဉ်ဆက်မပြတ်ကျင်းပခြင်းဖြင့် ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုများ ပိုမိုခိုင်မာလာခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်ရှိ နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ပူးပေါင်းဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုထိခိုက်စေသော တရားမ၀င် လက်နက်ကိုင်ဆောင်မှုများကို တားဆီးကာကွယ်ရေးကိစ္စရပ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နယ်စပ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကြမ်းဖက်မှုများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည့်အခြေအနေများ၊ ဘင်္ဂါလီများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းသားများမဟုတ်ဘဲ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ လက်အောက်ကျရောက်ချိန်တွင် ၀င်ရောက်လာခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြောင်း၊ ၁၉၄၂ ခုနှစ် တွင်အလယ်သံကျော်ဖြစ်စဉ်တွင် ဘင်္ဂါလီများက ဒေသခံရခိုင်တိုင်းရင်းသားများကို အကြမ်းဖြတ်သတ်ဖြတ်၍ မောင်းထုတ်ပြီး အဆိုပါနေရာများတွင် ၀င်ရောက်နေရာယူခဲ့ကြကြောင်း၊ ယခုဖြစ်စဉ်တွင်လည်းအဆိုပါပုံစံအတိုင်း လုပ်ဆောင်လာနေကြောင်း တွေ့ရှိရသဖြင့် တပ်မတော်အနေဖြင့် လက်မခံနိုင်ဘဲ ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် အကြမ်းဖက်မှုများကို တားဆီးနှိမ်နင်းခဲ့မှုအခြေအနေများနှင့် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား ဆက်ဆံရေးပိုမိုတိုးတက်ခိုင်မာစေရန် ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်သည် ညနေပိုင်းတွင် ထိုင်းဘုရင့်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးပုဂ္ဂိုလ် Gen. Prem Tinsulanonda(Rtd)အား ၎င်း၏နေအိမ်၌ သွားရောက်တွေ့ဆုံ၍ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်နေသည့်အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခ ချုပ်ငြိမ်းရေးနှင့် အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ မိမိတို့နိုင်ငံနှင့်ကိုက်ညီသည့် ဒီမိုကရေစီစနစ် အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်နေမှု အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာအပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ညနေပိုင်းတွင် ဒွန်မောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိ ထိုင်းဘုရင့်လေတပ် Wing6မှ ပြန်လည်ထွက်ခွာကြရာ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ် Lt. Gen. Thiwa Penket Gorn နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်မှအရာရှိကြီးများ၊ ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ပို့ဆောင်နှုတ်ဆက်ကြသည်။
ထို့နောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်း၊ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦး၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်အောင်မြင့်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးတို့က လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Following attacks of ARSA extremist Bengali terrorists, some of Daingnet ethnics arrive back, three dead and some missing
Ma Oo Khin, who was injured in attacks of ARSA extremist Bengali terrorists being sent to Tatmadaw Hospital in Buthidaung.
ARSA extremist Bengali terrorists attacked some Daingnet ethnics, who had moved from Yankarzedi Village in Maungtaw Township, Rakhine State, with sticks and swords near Kyaungdoe Village, and only one man named U Maung Ba Sein managed to escape. After he had informed Aungthabyay regional police station about the attack, security forces went to the scene and started operation on the morning of 27 August. At 12.45 pm, Ma Oo Khin, an ethnic Daingnet, was found with slashes in her neck, ears and head at her home in Yankarzedi Village. After receiving first-aid, she was sent to Aungthabyay regional police station for medical treatment.
The victim said that 22 Daingnet people along with 30 heads of cattle, while heading for Wailataung Village at 12 noon on 26 August, faced with about 100 ARSA extremist Bengali terrorists and were attacked with sticks and swords. She said her two-year-old daughter was slashed to death. Some managed to escape while some were killed. With injures, she said, she had to run towards Yankarzedi Village.
At 9.30 am on 27 August,atotal of 10 men and seven women, totalling 17 who fled away due to attacks of ARSA extremist Bengali terrorists arrived at Aungthabyay region police camp but five ethnics went missing.
While searching the missing Daingnet ethnics, the security troops foundasoil mound at the foot of hill, southeast of Kyaungdoe Village, at about6pm on 28 August. They unearthed it and found three remains with injuries of swords.
According to the approval of Daingnet ethnics, those remains were identified as Ma Kan Thi, her two years old daughter Ma Khin Nu, and Ma Oo Khin’s daughter two years old Ma Hla Thar Nu from Yankarzedi Village.
The medical officer from the security troops conducted forensic examinations at the remains and opened files of lawsuit under the law. The security troops are searching the remaining missing two ethnics.
Ma Oo Khin who suffers from injuries caused by attacks of ARSA extremist Bengali terrorists was sent to the Tatmadaw Hospital in Buthidaung by helicopter of the Tatmadaw at 3.10 pm yesterday, and she arrived at the hospital at 3.20 pm.
31 8 2017 Yadanarpon Daily by TheMyawadyDaily on Scribd
31 8 2017 Myawady Daily by TheMyawadyDaily on Scribd
30-8-2017 Thuta Alin by TheMyawadyDaily on Scribd
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်း၌ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ နေပြည်တော်၊ ဘုရင့်နောင် ရိပ်သာ၌ တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်း၌ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပစဉ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်း၌ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ ဗိုလ်ချုပ်သန်းထွတ်သိန်း သတင်းမီဒီယာသမားများကို ရှင်းလင်းပြောကြားစဉ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်း၌ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်စဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရ် နိုင်ငံစစ်သံမှူး Brig. General Rashedul Mannan ဆွေးနွေးမေးမြန်းစဉ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လအတွင်း ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ခြမ်း၌ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်သမားများ၏ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ဉ်များ နှင့်ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်၊ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ ဗိုလ်ချုပ် သန်းထွဋ်သိန်း၊ တပ်မတော်သတင်း မှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ် စိုးနိုင်ဦး၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ဓာတ်စစ်ဆင်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး(ကြည်း)မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ငံခြားစစ်သံမှူးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ သတင်း မီဒီယာကောင်စီ၊ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်း၊ မြန်မာ ဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက် တို့မှအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်တွင်း သတင်းဌာနများ၊ ပြည်တွင်းအခြေစိုက် ပြည်ပသတင်းဌာနများမှ သတင်းထောက်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
ဦးစွာ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ရဲဝင်းက ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ဘင်္ဂါလီများ၏ နောက်ခံသမိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဗြိတိသျှကိုလိုနီ ခေတ်တွင် ဘင်္ဂါလားနယ်နှင့် စစ်တကောင်းနယ်များမှ ဘင်္ဂါလီများစတင်ဝင်ရောက်လာခြင်း၊ ဘင်္ဂါလီများနှင့် ဒေသခံ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများအကြား ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှု၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ရခိုင်-ဘင်္ဂါလီ ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားမှု၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဘင်္ဂါလီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက် ခဲ့မှုအခြေအနေများ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလ မှ ၂၀၁၇ သြဂုတ်လ ယခုဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပွားသည့်အချိန်ကြားကာလအတွင်းဘင်္ဂါလီများ၏ အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းများအား ဦးတည်လုပ်ဆောင်လာမှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
၎င်းနောက် ဗိုလ်ချုပ် စိုးနိုင်ဦးက ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၅ ရက်မှစ၍ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်များ၊ လက်ရှိအချိန်အထိ နေ့အလိုက်ဖြစ်စဉ်များ၊ အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီများ၏ အင်အားသုံး၍ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိ၍ တပ်မတော်က ပူးပေါင်းကာကွယ်လုပ် ဆောင်နေသည့်အခြေအနေများအားလည်းကောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ် သန်းထွဋ်သိန်းက အစွန်းရောက်ဘင်္ဂါလီ အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်အနေဖြင့် သုံးသပ် လုပ်ဆောင်နေမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။
ထို့နောက် သြစတေးလျနိုင်ငံ စစ်သံမှူး Col. Paul Andrew Bruce က Search and Raid Operation လုပ်ဆောင်ရာတွင် မည်သည့် အင်အားအချိုးအစားဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်ကို သိရှိလိုကြောင်း၊ ဘင်္ဂါလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံစစ်သံမှူး Brig. General Rashedul Mannan က အကြမ်းဖက်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားလိုကြောင်း၊ အမေရိကန်နိုင်ငံစစ်သံမှူး Col. Craig J. Tippins က Search and Raid ပြုလုပ်ရာတွင် တစ်ချို့ရွာသား များအနေဖြင့် အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများဘက်သို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိနိုင်မှုကို သတိထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးမေးမြန်းကြပြီး မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာ ကောင်စီဝင် ဦးတင်မောင်အေးက အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်း အဝေးခေါ်ယူခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ Bullet ဂျာနယ်မှ ဦးလှဆွေက ဂျီနီဗာ ကွန်ဗင်းရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ News Watch ဂျာနယ်မှ ဦးမောင်မောင်ထွန်း ကအကြမ်းဖက် ဖြစ်စဉ်တွင် NGO ၊ INGO အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ပတ်သက်မှုများအား မေးမြန်းကြရာတာဝန်ရှိသူများက ဖြေဆိုခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် Gen. Surapong Suwana-adth က ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှတို့ အားထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်Gen. Surapong Suwana-adth နှင့်ဇနီး Mrs. Vanvimol တို့ကအမှတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ် ဆင်းတုတော်ပေးအပ်စဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Surapong Suwana-adth က ဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံစဉ်။
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် ထိုင်း-မြန်မာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများအစည်းအဝေး 5th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting သို့တက်ရောက်ခဲ့သည့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်သည့် မြန်မာ့တပ်မတော်ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား ယနေ့ညပိုင်းတွင် ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Surapong Suwana-adth က AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Center ၌ ဂုဏ်ပြုညစာဖြင့်တည်ခင်းဧည့်ခံသည်။
အဆိုပါဂုဏ်ပြုညစာစားပွဲအခမ်းအနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့်အတူ ဇနီးဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာစစ်သံ(ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ် ခင်ဇော်တို့ တက်ရောက်ကြပြီး ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူဇနီး Mrs. Vanvimol ၊ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် Gen. Theppong Tippayachan နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့အား ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး တို့က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြပြီး အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။ ထို့နောက်ညစာကိုအတူတကွ သုံးဆောင် ကြသည်။ ညစာ သုံးဆောင်နေစဉ်အတွင်း ထိုင်းနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ပိုင်းဒေသ ရိုးရာတေးဂီတအဖွဲ့က ထိုင်းရိုးရာတေးသီချင်းများဖြင့် သီဆိုကပြဖျော်ဖြေကြသည်။ ညစာသုံးဆောင်အပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ် ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နှင့်ဇနီးတို့သည် အမှတ်တရလက်ဆောင် ပစ္စည်းများ၊အပြန်အလှန်ပေးအပ်ကြသည်။
ယင်းနောက် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ထိုင်းဘုရင့်တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့သည် သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည့် တေးဂီတအဖွဲ့နှင့်အတူ အမှတ်တရစုပေါင်းဓာတ်ပုံရိုက်ကြပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ဂုဏ်ပြုဆုငွေများပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Myanmar-Thai HLC meeting will further strengthen trust, mutual understanding and friendship
Senior General Min Aung Hlaing and Chief of Defence Forces of Royal Thai Armed Forces Gen. Surapong Suwana-adth exchange emblems.
Senior General Min Aung Hlaing and Chief of Defence Forces of Royal Thai Armed Forces Gen Surapong Suwana-adth pose for documentary photo together with delegation members.
Myanmar and Thailand are good neighbours having the historical traditions of long and durable relations. At present, the bilateral relations between the two armed forces and two countries have reached the highest point.
We fully believe that the meetings will further strengthen trust, mutual understanding and friendship, said Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing in his opening address at the 5th Thailand-Myanmar High Level Committee-HLC Meeting held at AVANI Khon Kaen Hotel & Convention Centre in Thailand this morning.
Also present together with the Senior General at the meeting were Lt-Gen Than Tun Oo, Lt-Gen Min Naung, Lt-Gen Soe Htut, Lt-Gen Hsan Oo and Lt-Gen Nyo Saw of the Office of the Commander-in-Chief (Army) and senior military officers and Myanmar Military Attaché (Army, Navy and Air) to Thailand Brig-Gen Khin Zaw. Attending the meeting together with Chief of Defence Forces Gen. Surapong Suwana-adth of the Royal Thai Armed Forces were Vice Chief of Defence Forces Gen. Theppong Tippayachan and senior officers of the Royal Thai Armed Forces.Senior General Min Aung Hlaing and Gen. Surapong Suwana-adth delivered opening addresses.
Gen. Surapong Suwana-adth in his address said Thailand and Myanmar which are two good neighbours have cooperated in cultural and other sectors. The two neighbours have also implemented the bilateral cooperation undertakings and development projects and made joint investments. In addition, the two countries have exchanged visits of the leaders of the government and the Tatmadaw. At present, it can be seen that two armed forces between the two countries have been strengthening trust and friendly ties while solving problems under the cooperation plans. He expressed his belief that holding the meetings would be better in cooperation between the two armed forces of the two countries.
Senior General Min Aung Hlaing said Myanmar and Thai armed forces are cementing trust and friendly relations between the two countries and the two armed forces by holding the High Level Committee Meetings, regional level border committee meetings and township level border committee meetings regularly. Moreover, navies and air forces of both countries hold regular meetings and then promote cooperation between them. The best situation in relations and cooperation has been built between the two armed forces, and strenuous efforts will be made for improving the situation with momentum. As the meeting is of importance for property and security issues of the people of two countries, the Senior General expressed his hope that it will bring peace and stability to the border region between the two countries and good benefit to the residents from the border region.
Afterwards, Commander of 3rd Army Area Lt. Gen. Vijak Siribunsop explained results of the 31st Regional Border Committee Meeting while HLC Secretary Lt. Gen. Kumron Kearwichyajane clarified cooperation between the two armed forces.
Next, Chairmen of the 5th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting the Senior General and the Chief of Defence Forces of the Royal Thai Armed Forces approved the topics discussed at the meeting.
Then Senior-General and Thai Chief of Defence Forces delivered concluding remarks, signed and exchanged the agreement of the 5th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting. The two then exchanged emblems and posed for documentary photo together with attendees. The Senior General and the Thai Chief of Defence Forces had lunch together.
The joint secretarial meeting of 5th Thailand-Myanmar High Level Committee Meeting was held from 24 to 27 August in Thailand’s Bangkok. The meeting discussed cooperation between Thailand and Myanmar armed forces, academic and training, military medical services, exchange of goodwill visits, holding sports events, exchange of military cultural groups, cooperation in disaster management, fi ght against drug and arms smuggling, counterterrorism, and border security. Myanmar will host the 6th Myanmar-Thailand High Level Committee Meeting in 2018.
30 8 2017 Yadanarpon Daily by TheMyawadyDaily on Scribd
30 8 2017 Myawady Daily by TheMyawadyDaily on Scribd
29-8-2017 Tay Za by TheMyawadyDaily on Scribd
29 8 2017 Yadanarpon Daily by TheMyawadyDaily on Scribd